Nguva yekuverenga: 4 maminitsi Ngatiti uri kuronga kushanyira European Union chero nguva munguva pfupi. Kana zvakadaro, kune akateedzana matipi uye akakosha ruzivo ruzivo izvo zvinobatsira kuita kuti ruzivo rwako rwunakidze zvakanyanya. Mumwe anogona kufunga kuti hakugone kuve chaicho chakakura…
Nguva yekuverenga: 6 maminitsi The kondinendi European mumwe izere akapfuma munhoroondo, nyaya zvinoshamisa, adventures, uye dzimwe nguva chakavanzika. munyika dzose ine yakatarwa ayo akashamisa Nzvimbo. zvisinei, zvinoratidzika kuti Europe ine mamwe chinoshamisa uye asinganzwisisiki nzvimbo munyika. Chakavanzika chagara chine…
Nguva yekuverenga: 5 maminitsi Vakanguva rombo zvakakwana kunoona Europe vanoziva kufara uye nepfungwa uchinzvera kuti rinopa. Kufamba mu Europe kunogona kupfumisa upenyu hwako vakawanda nzira. From mitauro, naka zvinotyisa, uye nhoroondo kune tarenda chikafu kuti haugoni kuwana kumba. Avo…
Nguva yekuverenga: 4 maminitsi Vienna ndiye kufamba yakakurumbira rwendo, kunyanya nekuti yakanaka uye iri iro guta rine zvakawanda zvekupa Zvisinei, asiwo guta akaipoteredza. dzakawanda dzinonakidza nzvimbo. Kana uine nguva kuti zuva rwendo kubva Vienna, apo…